သင့်လျော်သောအနေဖြင့်မနက်စောစော Al-Adha ကို Message ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီသင့်လျော်သောမနက်စောစော Al-Adha ကို Message ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ
သင့်လျော်သောမနက်စောစော Al-Adha ကို Message ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, တူရကီ, TCDD 0
အားလပ်ရက်အောင်မြင်ရန်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီ, နေ့နှင့်ညဉ့်-ရောင်ခြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရသူကျိန် ဆို. ပူဇော် railwaymen အတူအလုပ်လုပ်, အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတွေအောက်မှာအနည်ထိုင်ဖို့အကွာအဝေး shortens ကျနော်တို့သံနှလုံးသားများကွန်ယက်ကလူကိုဆက်သွယ်နေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအစေခံရန်ဂုဏ်ပြုနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏မင်္ဂလာမနက်စောစော Al-Adha မွတ်စလင်ကမ္ဘာ့ဖလား congratulates နေကြတယ်, ငါငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းရန်အလိုရှိ၏။
စားသောက်ရန် nice ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ V.
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınမနက်စောစော Al-Adha ကို Message့10 / 09 / 2016 အဘိုးထိုက်သောခရီးသည်များ, ချစ်ခင်ရပါသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, အနှစ်တထောင်နှင့်လူတမျိုးကဲ့သို့တူညီသောပွညျ၌အတူတကွနေထိုင်နေကြ; ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ညီအစ်ကိုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားချက်တွေကိုဝေမျှပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီသောတဦးတည်းထက်မနက်စောစော Al-ရောက်ရှိဖို့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတွင်နေထိုင်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုခံရသောပွဲအတွက်တူရကီ-Konya ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့အားရထားနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းအမြန်နှုန်းအတွက် operating နေကြတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်ကျနော်တို့သော Marmaray နှင့်ခေတ်သစ်ထိုပွဲများတွင်မိမိတို့၏ချစ်ရသူရှင်းလင်းဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်စေဥရောပနှင့်အတူအာရှပင်လယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားရထား။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သန့်ရှင်းသူတို့နှင့်သူတို့၏ဘဝတွေကိုယဇ်ပူဇော်ကြ၏သူကိုအာဇာနည်ထိုက်ဖြစ်ချင်တယ်, ငါတို့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ...
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt Veys ရဲ့မနက်စောစော Al-Adha ကို Message 25 / 08 / 2017 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager Veys Kurt ရဲ့မနက်စောစော Al-Adha စာ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှု, မိဘမဲ့များနှင့်မိဘမဲ့နှင့်အတူထွက်ပေါက်အတွက် Root လုပ်ပြီးသား, ညှဉ်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုနဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီဖို့, အိပ်ရာဝင်ချိန်ဖို့ DART အိမ်နီးချင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်အောင်ကျွေးဖို့လက်တိုးချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ရှယ်ယာကြော့ရှင်းတှငျကငျြးပခဲ့ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအလှဆုံးဥပမာမျှဝေဖို့ပြသခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အလာနှင့်အတူသွေးစည်းညီညွတ်မှုရှိ "မေတ္တာကျောက်များ" "ငါစာအုပ်ဆိုင် ziya" ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပေါများကြွယ်ဝနှစ်ဦးစလုံး၏အခြေခံပေါ်မှာငါတို့ဘာသာ, ခွဲဝေမှုနှစ်ဦးစလုံး, တခြားသူတွေရဲ့ရက်ပေါင်းကုစားဖို့ခက်ခဲသည်။ အနစ်နာခံ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ, တစ်ဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရသူ၏ဤအသိကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုနေ့ရက်ကာလ၌ဆာဖြစ်လိမ့်မည်အားကောင်းလာစေပါတယ်။ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın"S မနက်စောစော Al-Adha ကို Message 25 / 08 / 2017 ချစ်ကြည်ရေး, ညီအစ်ကိုများနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး Kurban Bayram သူတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ရှယ်ယာခံစားချက်တွေကိုရောက်ရှိကြောင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏နောက်ထပ်ဆုံနေထိုင်ကြသည်။ အဆိုပါရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏မွေးစားအတူဦးစားပေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလမ်းကတည်းက 2003 ဒါဝေးကိုဖန်ဆင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို 60 ဘီလီယံကိုပေါင်ထက်ကျော်လွန်။ အထူးသဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းများနှင့်လျင်မြန်စွာစည်းရုံးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတွေ, ငါတို့သည်သံဖှဲ့ကွန်ယက် restart ချလိုက်ပါ။ ကီလိုမီတာရှည်လျားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း 33 သန်းအပေါ်, အာရှနှင့်ဥရောပသည်ပင်လယ်အောက်မှာပေါင်းစပ်ပြီးမမေ့နိုင်သောခရီးသွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ Marmaray'l လည်း 1.213 သန်းခရီးသည်ရှိသည်ဖို့ဂုဏ်ယူနေကြသည်တူရကီလူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကို xnumx'n မှ 34 အယူခံဝင်အကြားတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ-Konya နှင့် Konya-အစ္စတန်ဘူလ် ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်။ high-speed ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın"S မနက်စောစော Al-Adha ကို Message 19 / 08 / 2018 အဘိုးထိုက်သောခရီးသည်, ချစ်ခင်ရပါသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ညီအစ်ကိုများနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး Kurban Bayram သူတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ရှယ်ယာခံစားချက်တွေကိုရောက်ရှိကြောင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏နောက်ထပ်ဆုံနေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီးရထားစည်းရုံးခြင်း၏ခေတ်ပြိုင်လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အထိထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကအစပျိုးမစ္စတာညွှန်ကြားချက်ပွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များ၏စီးပွားရေးလွတ်လပ်ရေး၏အခြေခံဖွဲ့စည်းကြောင်းဒေသခံများနှင့်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှုများမှထုတ်လုပ်မှုပြင်းထန်စွာဆက်လက်နေကြသည်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်, ကြှနျုပျတို့လူဦးရေမြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလိုင်းများပေါ်တွင် YHT-ဘူတာရုံနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကွန်ယက်၏ 33 ကီလိုမီတာ xnumx'n ရာခိုင်နှုန်းကိုအစေခံများအကြားတူရကီ-Konya နှင့် Konya-အစ္စတန်ဘူလ်၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့နေ့ညဉ့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ကျနော်တို့တူရကီနှင့်ဒေသတွင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းစေရန်စတင် ...
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt Veys ရဲ့မနက်စောစော Al-Adha ကို Message 20 / 08 / 2018 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့အသိအတူတကွနေထိုင်, စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ဂုဏ်အသရေကြုံနေရစိတ်တံတားများ, ခွဲဝေမှုနှင့်ခြွင်းချက်ကာလ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုခိုင်ခံ့စေရာအဘိုးထိုက်သောခရီးသည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်များ, ။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရသူကပိုအသိဖြစ်လာတဲ့အခါဒီခြွင်းချက်ရက်။ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က, ပွဲခံရာပွဲလမ်းသဘင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ခမျြးမွှေခွငျးတှငျနထေိုငျဖို့အတှကျအားလုံးအစီအမံယူကြပြီ။ နေ့, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီး 25, 45 တထောင်သမားရိုးကျရထား, အ Marmaray နှင့်BAŞKENTRAYအဆိုပါ 250 တထောင်ခရီးသည်ခုနှစ်တွင်; 100 တထောင်ကုန်တင်ရထားပေါ်တွင်ကုန်တင်တန်ချိန်နေ့စဉ်အထူးသဖြင့်ခရီးသည်သိပ်သည်းဆအတွက်ဘယ်မှာပှဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီလိုင်း YHT လိုင်းဆောင် ခဲ့. 54 အပိုအချိန်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်လှည်းနှင့်အတူတထောင်ထိုင်ခုံ ...
အထွေထွေမန်နေဂျာ Erol Arikan မနက်စောစော Al-Adha မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ 10 / 08 / 2019 အစ္စလာမ့်ပညာရှင်အိဗ် Khaldun တစ်ဦးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်များ၏ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြိုကျပြင်ဆင်နေအတွက်အရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပိုပြီး xnumx'l တစ်နှစ်ပြောပါတယ်။ ဝမ်းသာစရာငါလူ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းပိုမိုတင်းကြပ်စွာရောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါတို့သည်ကျနော်တို့အရှင်ကျနော်တို့အတူတကွအားကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိအားကောင်းလာစေရန်ကြောင့်ငါတို့သီလအသကျရှငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုနှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထားတဲ့ဘာသာရေးအားလပ်ရက်အားဖြည့်, ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီဝိညာဏ် / 1300,7တစ်ရက်လွန်းအတွက် 24 နေ့စဉ်ခရီးသည် TCDD ရာပေါင်းများစွာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကုန်တင်ရထားပြေး, ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, ကုန်တင်တန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြောင်းလုံခြုံစွာသယ်ယူပို့ဆောင်သည်, ကျနော်တို့အချိန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောရထားချပြီးပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, တူရကီ-Kars လိုင်းမှာ Orient Express ကို ...
ကောငျး Views စာ Get ခွင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအနေဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen 21 / 02 / 2019 အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ကာဣနန်ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအလီ Ihsan သူတို့လျော်သော Hayirli ရဖို့သွားရောက်ကြည့်ရှု TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ကာဣနန်ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ဥက္ကဋ္ဌနှင့်သူတို့လျော်သော Hayirli ရဖို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလက်ထောက် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Atilla Demirtunç, အီဘရာဟင် Uslu နှင့် Mehmet Yildirim ။ သူတို့ကမိမိအအသစ်များကိုအနေအထားတွင်အောင်မြင်မှုအဘို့မိမိတို့ဆန္ဒကိုဖော်ပြသင့်တော်အလုပ်ကြိုးစားသူနှင့်ဒုတိယသမ္မတ Uslu, Demirtunçနှင့်လျှပ်စီး, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ။
စီမံခန့်ခွဲမှု TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုများလမ်းမှာဖြစ်ပါသည် 25 / 06 / 2019 အပြောင်းအလဲကိုဥက္ကဋ္ဌ Sakir Kaya နှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Suat, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, ကို Maintenance ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဝိန်းတူရကီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ugur Açıkgözလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနပြီးနောက်တူရကီမှကျယ်ပြန့်ခရီးစဉ်ကိုဖျော်ဖြေလမ်းမပေါ်တွင်အတွေ့အကြုံရှိအလုပ်တခုကို၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Gediz, တာဝန်Ergünay Oak ဌာနခွဲမန်နေဂျာနှင့်ကို Maintenance ဦးစီးဌာနလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၏ Manager ကို Menduh တူရကီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မိမိအအလုပ်များအချိန်ဇယားနေသော်လည်း Yoldere ကျယ်ပြန့်အချိန်ခွဲထုတ် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောအာဏာပိုင်များစီမံခန့်ခွဲမှုသွားရောက်လည်ပတ်လမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, သူသည်အစည်းအဝေးနှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ လိုင်းကို Maintenance အရာရှိ, လမ်းနှင့် EST ...
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınမနက်စောစော Al-Fitr ကို Message့05 / 07 / 2016 ကျနော်တို့ဿွာန်၏တစ်ဦးပြန်လည်ဆုံဆည်းဖို့ပိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့ကြုံနေကြခံစားချက်တွေကိုချစ်ကြည်ရေး, ညီအစ်ကိုများနှင့်ခွဲဝေမှုသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိ။ ဒါဟာတူရကီ-Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ-Konya နှင့် Konya-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းများ၏အစာရှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထား၏လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေမြန်နှုန်းမှာပွဲ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Marmaray'l နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျရထားနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်များ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုရောက်စေဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ တူရကီရဲ့အများဆုံးထူထောင်အဖွဲ့အစည်းများတစုံတပါးကဲ့သို့, ကျွန်ုပ်တို့က high-speed နဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလိုင်းများ, ရထားလမ်းနေ့နှင့်ညဉ့်အဖှဲ့ဖို့သမိုင်းတာဝန်ရှိသည်, ကျနော်တို့ခေတ်မီဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို 160 နှစ်ပေါင်း installed ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်အစဉ်အမြဲနှင့်အဖြစ်မြှုပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, ဤစီမံကိန်းများ၏သဘောပေါက်၌အကြှနျုပျတို့၏နိုင်ငံသားများသာယာဝအကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင် ...
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt မနက်စောစော Al-Fitr ကို Message 24 / 06 / 2017 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt မနက်စောစော Al-Fitr စာ: ဘာကိုငါတို့အားလုံးကိုလူ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေး၏စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်လုပ်သောအရေးအပါဆုံး features တွေထဲကတစ်ခုကိုမှန်ကန်စေသည်။ နေ့ရက်ကာလ၌ခြွင်းချက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာကမ္ဘာကြီးကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရေးပွဲတော်များ, စည်းလုံးညီညွတ်မှု, မျှဝေမှု, မေတ္တာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနို့တိုက်ကျွေးမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့သီချင်းအားဖြည်။ ချစ်ရသူနှင့်အတူဖြစ်သည့်အတွက်နေ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, ထိုခရီးသည်အတွက်မနက်စောစော Al-Fitr သမားရိုးကျနှင့် Marmaray ၌အကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးစေခြင်းငှါအစီအမံယူကြပြီအားလပ်ရက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်အသက်ရှင်ရန်ဝမ်းမြောက်ခြင်း, မြန်နှုန်းမြင့်ပေး, ငါတို့ချစ်ရသူရှင်းလင်းဖို့။ ခရီးသည်များ၏ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားစဉ်းစားပှဲနေ့အကြောင်းကိုမိသားစု, အဖြစ်ပို့ဆောင်ရေး TCDD ...
မနက်စောစော Al-Adha ကို Message
Kayseri ၏ပြဿနာမှနှစ်ပတ်လည် 50 21 သန်း TL ဖြေရှင်းချက်
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınမနက်စောစော Al-Adha ကို Message ့
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt Veys ရဲ့မနက်စောစော Al-Adha ကို Message
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın"S မနက်စောစော Al-Adha ကို Message
အထွေထွေမန်နေဂျာ Erol Arikan မနက်စောစော Al-Adha မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏
ကောငျး Views စာ Get ခွင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအနေဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen
စီမံခန့်ခွဲမှု TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုများလမ်းမှာဖြစ်ပါသည်
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınမနက်စောစော Al-Fitr ကို Message ့
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt မနက်စောစော Al-Fitr ကို Message